14 / 06 / 2021 14 / 06 / 2021 ခရစ် Wharfe 825 Views စာ0မှတ်ချက် 10273 သရဲခြောက်တဲ့အိမ်, ၁၀၂၇၆ Colosseum, 10283 NASA အာကာသလွန်းပျံယာဉ် Discovery, 10295 Porsche 911, 18 +, ရုက္ခဗေဒစုဆောင်းမှု, Creator Expert, Fairground စုဆောင်းခြင်း, Ideas, Lego, Lego သံအမတ်ကွန်ယက်, Lego ရုက္ခဗေဒစုဆောင်းမှု, Lego Creator Expert, Lego Fairground စုဆောင်းခြင်း, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Ideas, Lego မှ marvel, Lego Star Wars, Lego ဆောင်းရာသီကျေးရွာ, LEGO.com, Marvel, မော်ဂျူးလ်အဆောက်အ ဦး, modular အဆောက်အ ဦး စုဆောင်းခြင်း, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group, ဆောင်းရာသီစုဆောင်းမှု
အဆိုပါ Lego Group သည်နောက်ဆုံးတွင်၎င်း၏အငြိမ်းစားတံဆိပ်ခတ်ခဲ့သည် Creator Expert ၎င်း၏အသစ် 18+ တံဆိပ်ပိုမိုသင့်လျော်သောနာမည်တစ်ခုနှင့်အတူဆောင်ပုဒ်။
Modular Buildings Collection, Winter Village Collection နှင့် Fairground Collection အပါအ ၀ င်ကုမ္ပဏီအတွင်း၌အရွယ်ရောက်ပြီးသူအာရုံစူးစိုက်နိုင်သည့်အစုအဖွဲ့အများစုသည်တစ်ချိန်ကအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။Creator Expert', ထိုနာမကိုအမှီတရားဝင်အငြိမ်းစားခဲ့သည် May 2020 ၏ပစ်လွှတ်နှင့်အတူ 10273 သရဲခြောက်တဲ့အိမ်.
နောက်ပိုင်းလများအတွင်း '18 + 'တံဆိပ်အသစ်ကိုသယ်ဆောင်သောတည်ဆောက်မှုများတွင်မည်သည့်စုပေါင်းနာမည်ကိုမှမပေးခဲ့ပါ။ ၎င်းအစားအချို့သည်ထို 'Collection' tag အသစ်များကိုယူပြီးအခြားသူများမှာ - ကဲ့သို့သော 10283 NASA အာကာသလွန်းပျံယာဉ် Discovery, 10292 အဆိုပါ Friends Apartments နှင့် 10295 Porsche 911 - ကျော်လွန်မှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမအမှတ်တံဆိပ်ပေးထားပါပြီ Lego လိုဂို။
နောက်ဆုံးတော့အဲ့လိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့လိုလာပြီ Lego Group မှယခုအတည်ပြုခဲ့သည် Lego သံအမတ်ကြီးကွန်ရက်)လူကြီးများအတွက် Lego'' ယခင်ကအောက်မှာကျခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မော်ဒယ်အားလုံးအတွက်ထီးသက်တမ်းအသစ် Creator Expert အလံ။ ၎င်းသည် Botanical Collection, Modular Buildings Collection နှင့်ဤကဲ့သို့သောအရာများအထိပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်သူတို့အားစုဆောင်းမှုများအကြားအီသွင်၌မျောနေသည့်မော်ဒယ်များကိုပါလွှမ်းခြုံထားသည်။
အသိပေးချက်အချို့ရှိပါသည် - ဖြစ်နိုင်သည်မှာမဖြစ်နိုင်ပါ။လူကြီးများအတွက် Lego'ဥပမာအားဖြင့်သေတ္တာများ၌စတင်ပေါ်ထွက်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမည်သစ်ကိုအစားထိုးလိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုချက်ကိုလက်ရှိတွင်စောင့်နေသည်။ 'Creator Expert'အမျိုးအစားပေါ် LEGO.comအသကျရှငျနှင့်ကန်သောအရာ။
ထို့အပြင် 18+ တံဆိပ်ပြီးသားကျော်လွန်ခုန်တက်ထားပြီးနေစဉ် Creator Expert အပါအဝင်ထုတ်ကုန်လိုင်းများမှအစုံ Star Wars, Ideas နှင့် Marvelသူတို့အားမော်ဒယ်များနေဆဲတစ်ခုတည်းကိုသာ ap ရှိနေဆဲပါလိမ့်မယ်art သူတို့ရဲ့လက်ရှိအကြောင်းအရာများ၊လူကြီးများအတွက် Lego'အလံ။
ပန်ကာရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ဤသည်အခြေခံအားဖြင့်အားလုံးသည်အုတ်များနှင့်ဒုတိယဖြစ်သည်၊ သို့သော်မည်သို့မည်ပုံဖြစ်သည် Lego Group သည်၎င်း၏မော်ဒယ်များကိုစျေးကွက်သို့ရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းသည်မည်သည့်မော်ဒယ်များကိုပထမဆုံးထုတ်လုပ်မည်ဆိုသည့်အချက်များအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ လူကြီးများအတွက်သီးသန့်ထုတ်ကုန်များနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းအားဖြင့်လူကြီးများအတွက်စိတ် ၀ င်စားမှုမရှိသေးသောလူကြီးများအတွက်ဆက်လက်အာရုံစိုက်သည် Lego ထို့ကြောင့်နောင်လာမည့်လများနှင့်နှစ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရမည့်အရာများကို ဆက်လက်၍ ဆက်လက်ဖော်ပြနိုင်သည်။
← Lego Star Wars: Skywalker Saga သည် E3 2021 တွင်ပြသနိုင်ခြင်းမရှိချေ
Lego မှဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာ Star Wars: အဆိုပါ Skywalker Saga? →